Mirayiridzo yekushandisa Tabex, iyo yese yakasikwa kurega kuputa mushonga
Mashandisiro aungaita Tabex
Mashandisiro ekushandisa Tabex kurega kuputa mumazuva makumi maviri nemashanu
Tabex inoitwa nemuromo maererano nechirongwa chinotevera: Kana mhedzisiro isingagutsi, kurapwa kwacho kunogona kumiswa uye kurapwa kwemazuva makumi matatu kunogona kutangwazve mushure memwedzi 30-2. Kurapa kunofanirwa kuiswa zvinoenderana neiri rinotevera chirongwa:
Zuva 1 kusvika 3: 1 piritsi katanhatu zuva nezuva nekuderera kwakaenzana kwenhamba yefodya yakadyiwa. Pakupera kwezuva rechitatu iwe uchatora mudzanga wako wekupedzisira.
Zuva 4 kusvika ku12: 1 piritsi yega yega 1/2 maawa.
Zuva 13 kusvika 16: 1 piritsi maawa matatu ega ega.
Zuva 17 kusvika 20: 1 piritsi zuva nezuva.
Zuva 21 kusvika 25: 1 kusvika 2 mapiritsi zuva nezuva.
Iri chirongwa chekurapa chinotora rinenge mwedzi mumwe, uye rinogona kudzokororwa kuzere mwedzi miviri kutenderera. Tsvagiridzo inoratidza izvi kuva zvinonyanya kushanda pamwe nevarwere vazhinji vanorega kuputa mushure memazuva makumi matanhatu.
Kana iwe uri munhu anoputa zvakanyanya zvinokurudzirwa kuodha mapakeji maviri, saka kana iyo yekutanga kutenderera ikasabudirira unogona kubva watanga kechipiri kutenderera.
kusvuta kunogona kukonzera manzwiro asingafadzi mukati mehutongi hwaTabex. Huwandu hwefodya inosvuta nemunhu mumazuva matatu ekutanga anofanirwa kudzikiswa zvishoma nezvishoma. Kumira kuputa kwese kunofanirwa kuitika pasati papfuura zuva rechishanu mushure mekutanga kweyechokwadi.
Tabex inoshanda sei mukati mehuropi hwako? Zvidzidzo zvekuchipatara paTabex Nezve iyo Laburnum Muti